Maaster Pilaanii Finfinnee hojiirra oolchuuf dhaadatuu eegalan. | Oromia Shall be Free
Maaster Pilaanii Finfinnee hojiirra oolchuuf dhaadatuu eegalan.
bilisummaa September 3, 2015	Comments Off on Maaster Pilaanii Finfinnee hojiirra oolchuuf dhaadatuu eegalan.
Master pilaaniin Finfinnee kanaan dura mormii gaggeeffameen lubbuu Oromoota hedduu galaafate bara haaraa Itoophiyaa dhufaa jiru kanatti akka hojii irra oolu beeksifame.
Previous Ummanni Sooriyaa Turkiyaa keeysaan Awrooppaatti baqatu malee carraa biraa ni dhaban.
Next Master planii Addis Ababaa wayyaanee fi Icciitii isa duuba jiru…. Of baraaruuf tokkummaan haa kaanu!